"QUEEN ANNE": SIFOOYINKA, SHARAXAADDA IYO BEERISTA BARADHO - BARADHADA
Baradhada "Queen Anne": midho iyo waara
Geedka dhirta oo idil wuxuu rabaa inuu helo badeecooyin kala duwan oo ah baradhada hore, taas oo heerkulka hidde-wanaaga laga ilaaliyo fayrasyada iyo cudurada microbial, iyo sidoo kale si fudud oo loo beeray dalalkeenna oo siinaya khudaarta cagaarka ah ee dhadhan fiican leh. Rajooyinkan waxaa loo keenay dhabta jarmaliyiin Jarmal ah, kuwaas oo, kadib dadaal dheer iyo tijaabooyin, waxay soo bandhigeen adduunyo kala duwan oo ah baradho cusub, Queen Anne. Maxaa ka mid ah soo-saarka, faa'iidooyinka iyo faa'iido-darrooyinka ayaa la daboolay iyo shuruudaha lagama-maarmaanka u ah inay beeraan beertaada-waxaad ka baran doontaa arrimahan oo dhan.
Sharaxaad faahfaahsan ee kala duwan
Baradhada "Queen Anne" oo ah sharraxaad balaadhan oo kala duwan oo ku saabsan noocyada kala duwan ee dib u eegista macaamiisha. Si kooban, waxaa lagu tilmaami karaa shaqo guud ahaan, wax-soo-saarka badan ee botaniska Jarmalka oo leh digriiga jilicsan iyo xitaa huruud ah ee Bisaylkiisa hore. Laakiin tani waa qayb yar oo ka mid ah muuqaalka sawir buuxa, sidaas awgeed waxaanu ku faahfaahin doonaa faahfaahinta.
Ma taqaanaa? Qeybaha ugu qaalisan ee adduunka ayaa ku jira noocyada kala duwan ee "La Bonnotte", kaas oo lagu beeray aborigines jasiiradda Noirmoutier. Per kilogram of dalagyada xidid waa inay bixiyaan qiyaastii 500-600 euro.
Kala saarida dusha sare ee baradhada "Queen Anna" waxay ku xiran tahay sifooyinka soo socda:
Caleemaha waa kuwo aad u qallafsan oo istaagaya faafitaanka.
Guud ahaan, baadiyaha si toos ah ama polostyachy, size yar.
Caleenta waa mid weyn, cagaar mugdi ah, yar yar oo uurjiif ah, ma kala duwan yahay qaabka iyo xoqidda noocyo kale.
Inflorescences waa kuwo waaweyn oo leh cadaanyo cadcad, cufan oo daboolaya caleemaha.
Hubi noocyada kala duwan ee baradhada: "Luck", "Irbitsky", "Gala" iyo "Kiwi".
Digriiga digriiga ah ee "Queen Anne" ayaa hore u ahaan karaa 80 maalmood kaddib marka la beero. Muuqaalkooda kala-jajabku waa maqaarka cagaarka ah ee cirridka ah oo qaab dhismeed ah oo leh indho-yar oo muuqaal ah. Munaasabaddan, dib-u-eegid, gurigeyaal badan ayaa ka wada hadlaan fududaanta nadiifinta iyo soosaarista dalagyada xididka.
Dibedda, baradhadu waxay leedahay qaabka ovalaha ah. Miisaanka caadiga ah ee tuber dhexdhexaad ah wuxuu u dhexeeyaa inta u dhexeysa 84-150 g. Qaar ka mid ah tijaabooyinka waxay ku koraan dherer 10 cm. Gudaha, waxay leeyihiin huruud, hurdi adag oo ay ku jirto 14 ilaa 16 boqoljir. Waxay leedahay dhadhan fiican, ma karkarin jilicsan oo ma iftiin karin inta lagu jiro karinta.
Waa muhiim! Si ay u badbaadiyaan dalagyada xidid baradho laga bilaabo Baalallay, doorato noocyo hore ee beerto. Miraha waxay u bislaadaan ka hor intaan la cayimin cayayaanka iyo dhicin-noqoshada.
"Anna Anna" - Kala duwanaansho sare leh: hal barkad, sida caadiga ah, ilaa 16 khudradood ayaa kobcaya, iyo 1 hektar ilaa 457 sentimitir ayaa laga goyn karaa. Digriiga waa ay fududahay in la maydho, si fiican loo rarro, ku habboon kaydinta muddada dheer. Tayada haynta waxaa lagu qiyaasay 92%. Waxsoosaarayaasha waxaa badanaa la gadaa xilliga gu'ga sida khudaarta xididka ah.
Warshadu aad ayay u badantahay kansarka, qolof iyo fayras. Weli ka soo horjeeda dabaylo goor dambe, laakiin marxaladaha hore ee miro miro badbaadiya duurka ka soo cudurka.
Beeraha kala duwan ee Jarmalka ma aha mid ka duwan heerarka, caado u ah inuu bannaanka u ah cimilada cimilada ee cimilada. Dhibaatada kaliya ayaa ah baahida loo qabo qoyaanka gobollada koonfureed ee koonfurta. Waxa kale oo muhiim ah in la doorto goobta saxda ah ee sariiraha barafka ah iyo in aan la seegin wakhtiga beerto.
Goobta soo degta
Xulashada suunka baradho ah ee noocyo kala duwan waxay u baahan tahay in lagu xisaabiyo dalagga dalagga - dhammaan dalagyada casaanka ah iyo basbaaska macaan ayaa ah kuwo horay u liitay dalagyada xididka. Lama abuuri karo sanad walba isla goobta. Xaaladdan oo kale, cayayaanka, maadadaha iyo mycelium fungal si weyn u yareeyn doonaa parasitic dalagga ee ciidda. Xaaladaha aysan jirin sariir kale oo aan macquul ahayn in la baddalo dhulka, waxaad u baahan tahay inaad bacrimiso dalka oo leh digada cagaaran. Ujeedadaas awgeed, xilliga dayrta, sawirka waxaa lagu beeray marso caddaan ah, iyo marka geedo soo baxaan, waxaa lagu aasay dhulka marka beerta beerta.
Ma taqaanaa? Waa Korolev Anna baradho kala duwan oo ay ku koraan madaxwaynaha Belarusian Alexander Lukashenko ee uu degan yahay Drozdy.
Beeralayda waxay tixgeliyaan qajaarka, kaabajka iyo digirta inay noqdaan kuwa ugu fiican ee baradhada. Intaa waxaa dheer, aagga waa in lagu iftiimaa meel bannaan oo aan lahayn dhismo iyo geedo, iyo sidoo kale qabow oo qoyan. Marka aad dooranayso goob, waa muhiim inaad tixgeliso meesha ay ku yaalaan biyaha dhulka. Haddii ay aad ugu dhow yihiin dusha sare, waxaa lagugula talin lahaa in lagu beero cabir sare. Oo marka laga hadlayo dhul-beereedka, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo qoryo gaar ah ka hor intaan la beeri.
Kobcinta raaxada leh ee baradhada waxay bixisaa peat, chernozem, dhoobo boodh iyo digaag. Waxa ugu muhiimsan waa in substrate ahaa iftiin iyo dabacsan. Wixii dhalidda ee dalagga xidid waa ka kooban kiimikada ciidda. Taasi waa sababta beeralayda daryeellada ka dib goosashada bacriminta sariirta, halka sanadka soo socda ay qorsheynayaan in ay ku beeri "Queen Anne" oo leh digada iyo ash. Tani waa feederka ugu fiican. Mitirka mitir ayaa u baahan doona 10 kg oo ah khudaar ama digada iyo 1 liitar oo qoryo qoryo ah. Intaa waxaa dheer, waxaa suurtogal ah in lagu hagaajiyo ka kooban ee substrate leh magnesium iyo burka dolomite at heerka of 10 g halkii mitir.
Waa muhiim! Weligaa ha ku beerin digriiga baradho ee qabow, oo qoyan. Marka jawiga noocan oo kale ah, abuurku si fudud ayuu u jeexi doonaa, shaybaarka ka badbaadayna wuxuu abuuri doonaa geedo bukaan ah.
U hubso inaad tijaabiso goobaha aysidhka ee ciidda, sida bataatadu ay u liidato si liidata oo ah jawiga acidic iyo alkaline. Fikradda isaga ah waa fal celinta pH ee 5.1-6.0. Kadibna løvetann, coltsfoot iyo wheatgrass oo ku yaala goobta.
Xeerarka soo degaya "Queen Anne"
"Boqoradda Anna" waxay kasbatay ixtiraamka beerta iyo fududaynta beerashada. Noocyo badan ayaa ku qanacsan dhalidda sare, taas oo macquul ah xitaa beerashada aasaasiga ah iyo daryeelka.
Haddii xididada la duugo waqti hore, ma yaraan karaan ama waxay ku fariisan doonaan waqti dheer iyada oo aan wax calaamado ah oo nolosha ah. Beer goos goos ah ayaa sidoo kale si xun u saameyn doona xaaladda korantada iyo miraha mustaqbalka. Sidaa daraadeed, waxaa muhiim ah inaysan seegin waqtiga saxda ah. Wixii ah noocyo baradho hore, waqtiga ugu fiican waxaa loo tixgeliyaa tobanka sano ee saddexaad ee bisha Abriil ilaa bartamihii May. Qaar ka mid ah dadka degaanka xagaaga waxaa lagu hagaa caleemaha beeraha waxayna bilaabaan inay beeraan marka ay ubaxayaan.
Ha iska indha tirin xaaladaha cimilada iyo cimilada. Dhulku waa inuu si fiican u kululaa. Bannaanka loo yaqaan "Queen Anne" ayaa horay u daboolay aagga oo leh filim muddo ah.
Ma taqaanaa? Si uu Faransiisku u joojiyo inuu ka cabsado digriiga baradho iyo inuu bilaabo inuu koro, Fiisooyinka degaanka ee Antoine-Auguste Parmenter ayaa u adeegsaday tabaha maskaxda. Waxa uu beertiisa ku beeray dalagyo xidid ah oo maalin walba xayawaanka ilaaliya, habeenkiina waxay heleen duurka qarsoon. Dad badan ayaan la qabsan karin xiisaha iyaga oo kala jejebiyay oo soo galay beerta nin xushmad ah tuulada. Natiijadu waxay ahayd, baradhada waqti ka dib waxay bilaabeen inay koraan meel ka baxsan xuduudaha heshiiska.
Sida caadiga ah, cimiladu waa ku haboon tahay soo degitaanka iyo cimiladu waa diirimaad qoto dheer oo ah 10 cm ilaa 10 ° C.
Diyaarinta walxaha beerto
Si loo xaqiijiyo geedo baraf ah oo xoog leh oo baradho ah, waa lagama maarmaan si loogu diyaariyo abuur hore. Toddobaad ka hor intaan la beeriin, waxaa si taxadar leh loo xalliyaa, iska diidaa shaybaarka, lakulanka iyo shaybaarrada yaryar. Sidoo kale, ha ka tagin for rooting xididdo leh sprouts dhuuban khafiif ah.
Bacaha bacaha ee xididdada abuurka ah ayaa u soo baxa qorraxda, si ay u kululaan iyo siin caleemaha. Looma baahna in la daboolo baradho, oo ka baqeysa in ay cagaarsho ka hoos mariso roogagga toosan ee ultraviolet. Mitamorphosis noocan oo kale ah way ka fiican tahay, tan saloniin lagu sameeyay ilmaha caloosha ku jira waa sun, waxay ka cabsiisaa cayayaanka iyo jirooyinka, waxay ku kordhiyaan biqilka ka sii wanaagsan.
Marka la eego dhalidda "Queen Anne", marka ay beerto digriiga, fiirso masaafada u dhaxeysa iyaga. Waxaa lagugula talinayaa in aad dib u noqoto ugu yaraan 20 cm.Waxaa ka wanaagsan inaad baradho barafka jeexjeexyada, laakiin qaar ka mid ah beeralaydu waxay doorbidaan inay ku beeraan jadwalka.
Waa muhiim! Si ay baradho si guul leh u horumariyaan xididada, waxaad u baahan tahay inaad ka saarto ubax ka soo dhalada.
Sida loo hubiyo daryeelka saxda ah ee kala duwan
Daryeelidda sariirta barafka badiyaa waxay ka kooban tahay dhirbaaxada joogtada ah, dabacsanaanta ciidda iyo hoyga waqtigooda ah ee duurka. Boogaha waa in aan loo oggolaan in ay ka caroodaan on dhaqanka cawska, site xulashada dhirta lagama maarmaanka u ah cunto iyo xoog. Kala duwan "boqoradda Anna" ayaa si fiican uga jawaab celisa bacriminta potash. Waxay la wadaagi karaan dharka macmacaanka.
Haddii xayrta soo socota hanjabto caleemaha soo baxa, dabool sariirta habeenkii leh polyetylen ama xayawaan leh dushooda caleemaha, qiiq. Gobollada leh xagaaga kulul, ciidda qoyan yahay heer 40-50 cm. Kuleylka, ilaa 400 litir oo biyo ah toddobaadkii waa in lagu shubaa mitir kasta oo dhul ah.
Hillocks waxay ku xiran yihiin duurka kuwaas oo gaadhay 15 cm dherer ahaan. Haddii habsocodka dib loo dhigo, dhaliddu waa la yareyn doonaa sababtoo ah xayawaanka waxyeelada leh. Intaa waxaa dheer, dhammaan hawlihii jiheyntan waxaa lagu fuliyaa oo kaliya dhulka qoyan (ka dib waraabinta ama roobka). Gobollada koonfureed ee qalalan, waxtarrada noocan ah laguma talinayo, maadaama ay ku hanjabayaan dhaawac halis ah nidaamka xididka dhirta.
Waa muhiim! Digriiga bislaaday ee noocyo hore waxaa laguma talinayo in lagu hayaa dhulka, haddii kale waxay bilaabi doonaan Gagaab.
Xaaladaha xadgudubka badan ee xeerarka beerista iyo kaydinta bataatada beerta khudradda ah, dhirta ayaa ku dhacda cuduro badan. Dhammaan noocyada kalluunka, lafdhabarta, mycelium fungal, dillaac, kansar iyo qolof waa khatar gaar ah. Muuqaalka "Queen Anne" waa iska caabin aad u sareeya oo ku yimaada jirooyinkaas. Laakiin ka hortagga taranka haweenka, daryeelka carrada, fytocleaning ee ay duurka u nugul iyo dhirta dhirta leh Ridomil Gold iyo Charivnyk muhiim ah. Digriiga ka hor inta beerto, waa in la habeeyo kiimiko macnaheedu yahay "Maxim" ama "Prestige."
Si loo soo saaro musqulaha Colorado, xayawaanka, aboorka baradho, iyo Medvedka ma aha inay xadaan dalaggaaga, waxaa haboon in ay sanitize duurka u leh daroogooyinka: Bankol, Clean, Antizhuk, Aktara, Bi-58 New, Decis. Waxa kale oo lagugula talinayaa in laga saaro caws iyo waqti si loo dabciyo ciidda beerta, si aanay u abuurin xaalado wanaagsan ee cayayaanka waxyeello.
Haddii aadan rabin inaad ku hesho khasaaro weyn ee dalagga, baro sida loo xaliyo cayayaanka baradho.
Qarsoodiga ugu muhiimsan ee sababta noocyo baradho "Queen Anne" waxay qabsadeen beeralii, been ah sifooyinka soo socda:
difaaca jirka ee cudurrada caadiga ah ee khudaarta cagaaran;
badeecooyinka iyo dhirta cagaarka ee digriiga;
gaadiidka wanaagsan iyo ilaalinta tayada dalagga;
Ma taqaanaa? Khudradda koowaad ee koray meel bannaan waa baradho. Waxay dhacday 1995-kii.
Kala duwan ayaa leh waxoogaa yar. Waxaan jeclaan lahaa Queen Anne inay ku habboonaato abaaro oo aad u adkaysata gaboodfalka dambe. Inkastoo xaaladaha cudurka wakiilada ee fasalkaan aan la ogaan karin.
Hadda waa wax iska cad sababta abuurista jarmalka Jarmal ayaa doorbiday ma aha oo keliya beeralayda maxaliga ah, laakiin sidoo kale kuwa yaryar ee Yurub iyo Midowga Yurub. Wixii bannaanka u ah kuwa riyoodaya helitaanka dalagga sare oo tayo sare leh oo ka soo jimicsiga yar, "Queen Anne" waa raad dhab ah.